मोहन वैद्य भन्छन्, ‘यसरी हुनसक्छ प्रचण्डसँग पार्टी एकता’ – Kathmandutoday.com
मंगलबार, १९ साउन, २०७८
मोहन वैद्य भन्छन्, ‘यसरी हुनसक्छ प्रचण्डसँग पार्टी एकता’
काठमाण्डु टुडे २०७० फागुन २८ गते ९:३१ मा प्रकाशित
के गरेर समय बिताइरहनुभएको छ ?
पार्टी काममा छु । जिल्लाहरुका सम्मेलनमा गइरहेको छु । नेता कार्यकर्ता र जनतासँग भेटघाट गर्छु यसरी नै बितेको छ ।
संविधानसभा बाहिर बसेर पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसबारे हामीले धेरै कुरा बताइसकेका छौं । हामी पनि संविधानसभामार्फत जनताको संविधान बनाउनुपर्छ भनेरै यहाँसम्म आएको हो । तर त्यो परिस्थिति देखिएको छैन । हामीले त चुनावै बहिस्कार गरेको हुनाले संविधानसभाबाहिरै छौं ।
एकीकृत माओवादी संविधानसभाभित्र रहेको भए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । किनभने परिर्वतनविरोधी शक्तिको दुई तिहाई छ । जनताको हातबाट संविधानसभा खोसियो । त्यसैले जनताको संविधान निर्माणका लागि फेरि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
भनेपछि संविधानसभाबाट तपाइंहरुले चाहेजस्तो संविधान बन्दैन ?
संविधानसभाको जुन बनोट छ, त्यो हेर्दा जनताको पक्षमा संविधान बन्ने देखिंदैन ।
प्रधानमन्त्रीले तपाइंहरुसहित संविधानसभाबाहिर रहेका शक्तिलाई पनि सहमतिमा ल्याएर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ, जानुहुन्छ त ?
उहा“ले भनेको मिडियामार्फत सुनेको हुँ, तर औपचारिक रुपमा सरकारका तर्फबाट केही आएको छैन । हामी कसरी त्यो प्रक्रियामा जान सक्छौं र ? निर्वाचनका बेला हामीले अघि सारेका मागहरुलाई सम्बोधन नगरेर बाटो छेकियो र हामीले बहिस्कार गर्ने अवस्था आयो ।
उहाँकै मन्त्रीहरु भन्दैछन् कि सहमति सम्भव छैन, संविधान निर्माणमा प्रक्रियामार्फत जाने हो । त्यसो भनिसकेपछि कसरी हाम्रो समेत सहभागितामा संविधान बन्न सक्छ ? हामी त्यो प्रक्रियामा जाने कुनै सम्भावना छैन ।
मन्त्रिपरिषदले मनोनित गर्ने २६ जनाबाट वा संविधानसभाको आकार केही बढाएर भए पनि तपाइंहरुलाई समेट्ने कुरा सुनिएको छ नि ?
हामीले हिजो चुनाव बहिस्कार गरेको हो । तर अहिले कसैले दयाले दिएको केही सिट लिएर अपमानजनक ढंगले संविधानसभामा जाने त कुरै आउ“दैन । तर राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि जाने कुराको हामी कहिल्यै विरोधी छैनौं ।
१२ बुँदे समझदारीयता भएका सबै सहमति र सम्झौताहरुको पालना हुन्छ भने हामी सहमतिका लागि तयार छौं त पहिल्यैदेखि भन्दै आएको हुरा हो । उहाँहरु ती सबै सम्झौता तोडेर अगाडि गइरहनुभएको छ, त्यसकारण सहमतिको सम्भावना हामी देख्दैनौं ।
हामीले सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाको गठन गरौं र नयाँ राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जाऔं भन्ने विषयलाई कार्यनीतिक नाराका रुपमा पटकपटक उठाउँदै आएका छौं । यो कुरा उहाँहरु मान्नुहुन्न । त्यसैले संविधानसभामार्फत राष्ट्रिय राजनीतिक निकास निस्कंदैन भन्ने कुरा प्रष्ट हो ।
प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा समस्या समाधानका लागि तपाईंहरुले भनेजस्तो गोलमेच सभा आयोजना गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो, उहाँमा समस्याप्रतिको गम्भीरता त देखियो नि होइन ?
खै उहाँले कहाँ के भन्नुभयो मलाई थाहा भएन । आधिकारिक रुपमा त्यस्तो केही आएको छैन । देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले समस्या समाधान गर्दिन, सहमति गर्दिन त भन्नै मिल्दैन नि । औपचारिकताका लागि गरिएका कुराहरुको के अर्थ हुन्छ र ? तर हामी वार्ता नै नगर्ने पक्षमा छैनौं । वार्ताका लागि सधैं तयार छौं ।
तपाइंहरुलाई संविधानसभा बाहिर राखेर र एकीकृत माओवादीलाई भित्र लगेर दुवैलाई सकाउने अन्तर्राष्ट्रिय खेल भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, के कुरा त्यस्तै हो त ?
त्यस्तो टिप्पणीमा कुनै तथ्य र दम छैन भन्ने लाग्दैन । एकपछि अर्को घटनाक्रमहरु हेर्दै जा“दा त्यो कुरा हो जस्तो लाग्छ । कसकसले कहाँकहाँबाट के गरिरहेको छ भन्ने त अहिले नभनौं तर परिवर्तनको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीमा विभाजन ल्याएर प्रतिगमनलाई पूर्णता दिने षड्यन्त्र भएकै हो ।
पार्टी एकताबारे चर्चा सुनिन थालिएको छ, के त्यसबारे पहल अघि बढेको हो ?
मणि थापा र परि थापाहरुस“ग वार्ता गर्ने निर्णय भएको हो । त्यसका लागि वार्ता कमिटि नै बनेको छ । वार्ता कमिटिले कुराकानी गरिरहेको छ ।
हामी माओवाद मान्ने शक्तिहरुलाई एकजुट बनाएर क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माण गर्ने अभियानमा छौं । छरिएर रहेका क्रान्तिकारीहरुलाई गोलबद्ध गर्ने औपचारिक निर्णय नै भएको छ ।
मैले एकीकृत माओवादीसँग एकताको कुरा गरेको,
एकीकृत माओवादीसँग यथास्थितिमा एकता हुने सम्भावना छैन । पहिले त नयाँ जनवादी क्रान्तिको साझा राजनीतिक कार्यदिशा बन्नुप¥यो । पहिला उहाँहरु जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशामा आउनुप¥यो । जसरी संसदवादलाई सुदृढ गर्न संविधानसभाको उपयोग गरिरहनुभएको छ, त्यसबाट बाहिर आउने आँट गर्नुभयो भने पार्टी एकता हुन्छ । तर त्यसबारेमा हामीले गम्भीर खालका कुराकानी गरेका छैनौं ।
दुई पक्षबीच भएका अनौपचारिक छलफलहरु सकारात्मक ढंगले अघि बढेको भन्ने सुनिन्छ नि ?
कुराकानी नै नहुने भन्ने त होइन । बेलाबेलामा कुराकानी भएकै छ । तर पार्टी एकताकै बारेमा केन्द्रित रहेर गम्भीरतापूर्वक कुराकानी भएको छैन ।
हामी हिजो राजनीतिक कार्यदिशा नमिलेर अलग्गिएका हौं । त्यसैले कुराकानीका क्रममा हामीले तपाईंहरुले लिएको कार्यदिशा सच्याएर क्रान्तिकारी कार्यदिशामा आउनुस् भन्ने आग्रह गर्ने गरेका छौं । उहाँहरु संसदवादबाट मुक्त हुन सक्नुभयो भने एकता हुन सक्छ । राजनीतिमा असम्भव भन्ने त के हुन्छ र ?
एकीकृत माओवादी पालुङटारको कार्यदिशामा फर्कियो भने एकता हुन्छ भन्नुभएको रहेछ, त्यो भनेको के हो ?
जतिबेला पालुङटार बैठक भयो त्यतिबेला हामी एकै ठाउँमा थियौं । त्यसले क्रान्तिको पूर्णताका लागि के गर्ने भन्ने निर्णय लिएको थियो । छोटोमा भन्नुपर्दा नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा हो भनेर बुझ्दा सजिलो होला । नयाँ जनवादी क्रान्ति जनविद्रोहमार्फत सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह वा अन्य तरिकाबाट जनविद्रोह ?
कुरा जुसुकै गरिए पनि भनेको जनविद्रोह हो । जनयुद्ध भनेको हाम्रो इतिहास हो । त्यो गज त छंदैछ । हामीले गर्न खोजेको सहरी जनविद्रोह हो ।
त्यो सम्भावना छ र ?
सम्भावना किन छैन ? संसारमा असम्भव भन्ने चिज केही छ ? हामीले जे गर्ने भनिरहेका छौं, त्यसका लागि परिस्थिति अनुकुल बन्दै गएको छ ।
एक्लै सहरी विद्रोह गर्न नसक्ने देखेर एकताको कुरा अघि सार्नुएको हो ?
एक्लै गर्ने भनेकै छौनौं नि । सहरी विद्रोह गर्न त ठूलो शक्ति चाहिन्छ । जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । हामीले मात्र भनेर त हुँदैन नि । सबैभन्दा पहिले त सच्चा क्रान्तिकारी पार्टीको नेतृत्वमा सबैलाई गोलबन्द गर्नुप¥यो । संयुक्त मोर्चा बलियो हुनुप¥यो ।
देशभक्त र वामपन्थी शक्तिलाई गोलबन्द नगरी विद्रोह गर्ने कुरा हामीले कहिल्यै गरेका छैनौं ।
परिस्थितिले पार्टी एकताका लागि तपाईंहरुलाई बढी बाध्य पारेको हो कि एकीकृत माओवादीलाई ?
त्यसरी कसलाई बाध्य पा¥यो भन्ने कुरा नभनौं । कमयुनिष्ट क्रान्तिकारीहरुबीच एकताको खाँचो छ । तर एउटा कुरा के हो भने हामी उहाँहरु जसरी संविधानसभामा चोपलिन गएनौं, त्यसबाट मुक्त रहन सफल भयौं ।
हामी कसैको दबाबमा नपरी राजनीति गर्छौं । हाम्रो केन्द्रीय समितिले क्रान्तिकारीहरुसँग पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट निर्णय लिएको छ । त्यो प्रक्रियामा हामी निश्चित रुपमा जान्छौं । यसलाई परिस्थिति वा अन्य केहीको दबाबमा रुपमा लिन मिल्दैन, अहिलेको आवश्यकताका रुपमा बुझ्नुपर्छ । सच्चा क्रान्तिकारीहरुलाई गोलबद्ध गर्नु एतिहासिक आवश्यकताको विषय भएको छ ।
एकीकृत माओवादी चाहिं अझै क्रान्तिकारी शक्ति हो वा तपाईंहरुले पहिले भनेजस्तो बाटो बिराएको नवसंशोधनवादी गुट ?
एकीकृत माओवादीभित्र ठूलो संख्यामा सच्चा क्रान्तिकारी नेता र कार्यकर्ताहरु हुनुहुन्छ । तर उहाँहरुमा धेरै प्रकारका विचलनहरु देखिए । हामीले अझै पनि भनिरहेको कुरा के हो भने ती विचलनहरुलाई सच्याउनुप¥यो । कार्यदिशामा ठीक ठाउँमा आउनुप¥यो, त्यो भनेको नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा हो ।
उहाँहरु पनि हामी क्रान्ति नै गरिरहका छौं भनिरहनु भएको छ नि त ?
त्यो त मुखले भनेर हुँदैन । प्रमाण र साक्षीका रुपमा दस्तावेजहरु हेरे थाहा भइहाल्छ नि । पार्टी क्रान्तिकारी हुन कार्यदिशा क्रान्तिकारी हुनुप¥यो नि ! संसदवादमा चुर्लुम्म डुबेर क्रान्तिको कुरा गर्न मिल्छ ?
पार्टी एकता भयो भने नेतृत्व तपाईंले लिने कि पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ?
यो त सन्तान जन्मनु कहिले कहिले भोटो सिउने अहिले भनेजस्तो भयो । पहिला पार्टी एकताका लागि कार्यदिशामा कुरा मिल्नुप¥यो । त्यसपछि पो नेतृत्वको कुरा आउँछ । मुख्य कुरा राजनीतिक कार्यदिशा हो नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने गौण कुरा हो । यो विषयमा अहिले कुरै नगरौं ।
अहिले पार्टी एकताको कुरा गर्नेले चुनावका बेला किन एमाओवादीलाई हराउन लाग्नुभएको त ?
चुनाव उहाँहरुकै कारण हार्नुभएको हो । उहाँहरुकै गलत कार्यदिशाले चुनाव हार्नुभएको हो । तर पार्टी फुट पनि चुनाव हार्नुको एउटा कारण चाहिं थियो ।
माथि बहिस्कार भने पनि तलतल तपाईंका कार्यकर्ताले पैसा खाएर काँग्रेस–एमालेका उम्मेदवारलाई भोट दिएको त हो नि ?
यो एकदम झुठ प्रचार हो । कुनै बिग्रिएको मान्छेले कतै त्यसो ग¥यो होला, तर नीतिगत रुपमा पैसा लिएर कसैलाई हराउने र कसैलाई जिताउने भन्ने कुरा हाम्रो थिएन । विगतमा एकै ठाउँ हुँदा पनि हामीले चुनाव बहिस्कार गरेका थियौं । त्यतिखेर पनि एदाकदा कसैले बदमासी गरेका थिए । तर मुलभुत रुपमा त्यो आरोप सरासर गलत हो ।
एकीकृत माओवादीको हारबाट तपाईं खुसी कि दुःखी ?
खुसी वा दुःखी भन्दा पनि उहाँहरु जुन बाटोमा गइरहनुभएको छ , त्यो गलत छ । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । मलाई लाग्छ जनताले उहाँहरुलाई सच्चिने मौकाका लागि यस्तो परिणाम दिएका हुन् । यसलाई सच्चिने अवसरका रुपमा प्रयोग गरिदिए त्यो देश र जनताको हितमा हुने थियो ।
तपाईरुसँग पार्टी एकताको सम्भावना बढेका कारण एमाओवादीभित्र पछिल्लो समय विवाद देखिएको हो भनिन्छ नि ?
उहाँहरुभित्रको कुरा के हो ? मानिसहरुले के भन्छन् त्यो त हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन । उहाँहरुका आन्तरिक मामिलामा हामीले टिप्पणी गरिहाल्न मिल्दैन । हामीले टिप्पणी गरेर पनि केही हुने होइन ?
पार्टी विभाजनको झण्डै दुई वर्ष हुन लाग्दा समेत सबैले देख्ने गरी केही गर्न सक्नुभएन, यस्तो अवस्थामा तपाईंहरुलाई अरुभन्दा फरक हो भन्ने आधार के त ?
रातारात केही हुँदैन नि । हामी अहिले बाटो बनाउने काम गरिरहेका छौं । सैद्धान्तिक र राजनीतिक रुपमा हामीहरु ठीक ठाउँमा आएका छौं । किन भने हामी विभिन्न प्रकारका भड्काव र विचलनहरुबाट मुक्त छौं । नयाँ ढंगले अघि बढ्नका निम्ति वातावरण तयार पार्न जरुरी हुन्छ । अहिले हामी त्यही गरिरहेका छौं । यो बीचमा विचारधारात्मक, राजनीतिक र सांगठनिक रुपमा थुप्रै काम भएका छन् । परिणाम आउने गरी काम गर्नका निम्ति अझै केही समय चाहिन्छ ।
कसरी जाने भन्नेमा विवाद छ रे हो पार्टीमा ?
त्यो विकल्कुल गलत कुरा हो । बाहिर कसले के भन्छ त्यसको पछि लाग्न मैले जरुरी ठानेको छैन ।
सचिव नेत्रविक्रम चन्द र तपाईंबीच राजनीतिक कार्यदिशाकै विषयमा विवाद छ भन्ने सुनिन्छ ?
कम्युनिष्ट पार्टीभित्र छलफल बहस हुन्छ । हाम्रोमा पनि बहस हुने गरेको छ । तर त्यो क्रान्तिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हो ।
हामीबीच विवाद छैन भन्ने प्रमाणका लागि महाधिवेशन र केन्द्रीय समितिबाट पारित सैद्धान्तिक र राजनीतिक प्रस्ताव नै काफी छन् । पार्टीमा हरेक निर्णयहरु सर्वसम्मत रुपमा हुने गरेका छन् । अनि कसरी विवाद भन्न मिल्छ ? यो नितान्त गलत कुरा हुन् ।
सिंगै जीवन कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बिताउनुभयो, तपाईंलाई सबैले सरल र सिद्धान्तनिष्ठ नेता पनि भन्छन् तर त्यसका बावजुद नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुमा के तपाईं वा तपाईंको पुस्ताको कुनै भूमिका छैन ?
अहिले जे भयो त्यो पुस्ताको कारणले भएको होइन । यो विचारका कारणले भएको हो । मानिसहरुले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बूढो पुस्ता र नयाँ पुस्ताको कुरा गरेको सुन्छु । यो वाहियात बहस हो ।
सांगठनिक रुपमा सिद्धान्ततः हामीले पूराना पुस्ता, बीचको पुस्ता र नयाँ पुस्ताको समान उपस्थिति गराउनुपर्छ भन्दै आएका छौं । पाको हुँदैमा विचारमा पूरानो र नयाँ हुँदैमा विचार नयाँ भन्ने हुँदैन ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पुस्ताभन्दा पनि बेलाबेलामा गम्भीर प्रकारका दक्षिणपन्थी विचलनहरु देखिंदै आएका छन् ।
हामीले जनताको जनजीवनमा प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी केही गर्न नसक्नुमा विचलन नै मुख्य कारण हो । दक्षिणपन्थी संशोधनवाद हिजो र आज पनि प्रमुख खतराका रुपमा देखिएको छ । त्यही कारण कम्युनिष्ट आन्दोलनमा धोका र षड्यन्त्रहरु हुँदै आएका छन् ।
तपाईं ढुक्क भएर नेपालका क्रान्ति हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर मानिसहरु भन्छन् कि तपाइंहरुजस्तै नेताका कारण नेपालमा अब कम्तिमा कम्युनिष्ट आन्दोलन उठ्न सक्दैन, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
जनतामा केही अविश्वास छ र कमीकमजोरी भएको कुरा पनि सत्य हो । तर संसारमा र खास गरी नेपालमा कम्युनिष्ट शक्तिको विकल्प छैन । किन भने अर्को ध्रुवतिर हेर्नुभयो भने के अब संसदीय व्यवस्थाले निकास दिन सक्छ त ? संसदीय व्यवस्था त साम्राज्यवादतिर गइसक्यो ।
संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्नेहरुले साम्राज्यवादको आडमा निकै लुट मच्चाएका छन् । संसदवादले मुलुकको मुक्ति हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले मुलुकको मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि संघर्ष गर्दै आएका हौं । त्यो धाराले त नेपाललाई सधैं वैदेशिक शक्ति केन्द्रको छातामुनि राख्न चाहान्छ । त्
यसैले राष्ट्रिय स्वाधिनताको खतरा पनि गम्भीर छ नेपालमा । जनतालाई मुक्ति दिन र राष्ट्रिय स्वाधिनता बचाउन कम्युनिष्टबाहेक अरुले सक्दै सक्दैन ।
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, दलितहरु यी सबैसबै मिलेर एकढिक्का भएर जाने हो भने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अहिले पनि संविधानसभाबाट समस्याको हल हुनेवाला छैन । त्यसकारण अब ५० वर्ष केही हु“दैन भन्ने कुरा निराशा फैलाउने कुरा होला, तर विकल्पहरु छैनन् ।
भनेपछि संसदीय व्यवस्थाका कमजोरीका कारण तयार भएको आधारमा टेकेर कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य निर्धारण हुने रहेछ है ?
त्यो त हामीले कहाँ भनेका छौं र ? हाम्रो उद्धेश्यत नेपालमा विद्यमान अर्धसँमन्ती, अर्धऔपनिवेशिक अवस्थालाई जनवादी क्रान्तिमार्फत अन्त्य गरौं र समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाऔं भन्ने हो ।
हाम्रो सैद्धान्तिक आधार त प्रष्टै छ । तर त्यसको पछाडि संसदीय व्यवस्थाले जन्माएका विक्रितिले जनता त्यसको विकल्प खोज्न तयार भएका छन् भनेको मैले । त्यो कुरा पनि त हो नि । लेनिनको भाषामा भन्ने हो भने आजको दुनियाँ भनेको साम्राज्यवाद र सर्वंहारा क्रान्तिको दुनियाँ हो ।
अहिले साम्राज्यवाद बलियो र सर्वहारा क्रान्ति कमजोर छ, यो निश्चित कुरा हो । तर साम्राज्यवादविरुद्ध विश्वसर्वहारा क्रान्तिको पक्षमा हामी छौं । त्यो सफल पनि हुन्छ, हाम्रो मार्गचित्र प्रष्ट छ ।
अहिले पनि विश्व राजनीति लेनिनले १८ औं शताब्दीमा भनेजस्तो छ र ?
अवस्था उही छ । अहिले अलिकति विकसित मात्र भएको हो । त्यसबेला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको उदय भएको थिएन । अहिले औद्योगिक पुँजीको अवस्था कमजोर र वित्तिय पुँजीको प्रभुत्व बलियो भएको अवस्था छ । त्यसैले सिद्धान्ततः लेनिनले भनेको भन्दा फरक स्थिति अहिले पनि छैन ।
यस्तै कुरा गर्ने गरेको भएर होला तपाईंमाथि किताबदेखि किताबसम्म र सिद्धान्तदेखि सिद्धान्तसम्म सीमित रहने जडसूत्रवादी नेता भन्ने गरेका है ?
विश्वभरि नै क्रान्तिकारीहरुलाई जडसूत्रवादीको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो अवसरवादीहरुले क्रान्तिकारी शक्तिविरुद्ध प्रयोग गर्ने गरेको थेगो हो । जसले क्रान्तिकारीहरुलाई जडसूत्रवादी भन्छन् र नयाँ नयाँ कुरा ल्याउने भन्छन्, उनीहरुको नयाँ कुरा भनेको पूरानै संसदीय व्यवस्था । मलाई यो देखेर विचित्र लाग्छ । नेपाली क्रान्तिमा नयाँ कुरा ल्याउनुपर्छ भन्नेहरु संशोधनवादी भासमा फसेका छन् । अनि उनीहरुले नै हामिमाथि जडसूत्रवादीको आरोप लगाउने ? जसले क्रान्तिकारी शक्तिमाथि जडसूत्रवादीको आरोप लगाएका छन्, उनीहरुले साम्राज्यवादको सेवा गरिरहेका छन् ।
तपाईंहरुले प्रतिक्रियावादी भन्ने गरेका शक्तिले मात्र होइन यो आरोप त तपाईंकै पूर्वसहकर्मीहरुबाट पनि लाग्दै आएको छ, उहाँहरु नयाँ तरिकाले जान खोज्दा जडसूत्रवादको शिकार भएर तपाईंहरुले बुझ्दै–बुझ्नु भएन भन्नुहुन्छ नि ?
उहाँहरुले नयाँ तरिकाले गर्दा त अहिलेको यो हविगत भएको हो नि । सारा जनमुक्ति सेना बुझाएको छ । संसदीय भासमा फसेको छ । उहाँहरुले भन्ने गरेको नयाँ तरिकाको त पर्दाफास भइसकेको छ । अब नयाँका नाममा कोही झुक्किने अवस्था छैन । अझै यो तरिकालाई नयाँ भन्दै अगाडि जाने हो भने त समाप्तै भएर जाने अवस्था छ । यस्तै हुन्छ भनेर त हामीले उहिल्यै भनेको हो ।
आखिर आज आएर परिणाम हेरौं न पूरानै भएर सोच्नेले भनेको ठीक कि नयाँ दाबी गर्नेले सोचेको ठीक ? रुपमा नयाँ कुरा गरेर के गर्नुहुन्छ उहाँहरु सारमा असाध्यै पूरानो र पतनोन्मुख संसदीय शक्तिमा रुपान्तरण हुनुभयो । यो शाब्दिक कलेबरमा खेल्ने कुराबाहेक केही होइन । त्यसैले जनताको मुक्ति हुनुपर्छ भन्दा जडसूत्रवादी या अरु जस्तोसुकै आरोप लागोस् म त्यसको कुनै पर्वाह गर्दिन ।
थप कडाई गर्दै थपिने काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा
कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरण फर्कंदै
प्रचण्ड र देउवाबीच लफडा
पोखराबाट चौध घण्टाको यात्रा अब ३५ मिनेटमै !
काँग्रेसले ८, माओवादी र जसपाले ७ मन्त्रालय पाउने
थप ३३८३ जना संक्रमित, १९९४ जना संक्रमणमुक्त
सङ्क्रमण बढ्यो, उपत्यकाका अस्पताल भरिए
कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन
लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल विरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
निर्वाचन आयोगले ग¥यो ४१ वटा राजनीतिक पार्टीको दर्ता खारेज
Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us